.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: SWF Text v1-4 Portable
ကျွှန်နော်အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ ဖလတ်ဆောင်းအသေးစားလေးပါ။ မြန်မာလိုတော့ ရေးလို့မရဘူးဗျ။
သူငယ်ချင်းတွေကို အမှတ်တရနေ့လေးတွေမှာ BIRTHDAY WISHES လေးတွေလဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြီး ပေးလို့
ကောင်းပါတယ်။ effects တွေလဲ အများကြီးပါတယ်၊ သီချင်းလေး လဲ ထည့်လို့ရတယ်။ အရင်က ဆိုဒ်တခုက တင်ပေးဖူးတာ
Trial Version လေး အကြိမ်၃၀ ပဲသုံးရတယ်၊ခုမှ ဗီယက်နန် ဆိုဒ်တခုက Full version လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2mb ထဲပါ။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ်။ ဒါလေးက ကျွန်တော်လုပ်စမ်းထားတာလေးပါ။
(၁) အနက်ရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ Movie ဆိုတာလေးမှကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
အ၀ါရာင်ကွက်ပြထားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်လောက်နံပါတ်ရေးလိုက်ပါ။
(၂) အနက်ရောင်ပြထားတဲ့ Background Effect နေရာမှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အစိမ်းရောင် ကွက်ပြထားတဲ့အထဲကမိမိကြိုက်မဲ့ Effect ကိုရွေးလိုက်ပါ ကလစ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၃) စာသားထည့်ပါမယ် အနက်ရောင်ပြထားတဲ့Text ဆိုတဲ့နေရာမှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်အစိမ်းရောင်ပြထားတဲ့နေရာက Add ဆိုတာလေးကိုဆက်ကလစ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Box လေးတစ်ခုထွက်လာမယ် မိမိရေးချင်တဲ့စာလေးရေးလိုက်ပါ။ (မှတ်ချက် မြန်မာလိုမရပါ)
(၄) စာကြောင်းတွေကိုEffect ထည့်မယ်
အနက်ရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ Text Effect နေရာမှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ အစိမ်းရောင်အကွက်ထဲကမိမိကြိုက်မဲ့ Effect တစ်ခုကလစ်လုပ်ကြည့်ပါ။
ပြီးရင်preview ကို click ကြည့်လိုက်ပါ စာကြောင်းလေးတွေ ဘယ်လိုလေးပြေးလွှားနေလည်းပေါ့။
(၅)သီချင်းသံလေးရော ထည့်ချင်သေးရင် အနက်ရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ sound ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာ သီချင်းထည့်လိုက်ပါ။ ( Mp3)သီချင်းကတော့ မထည့်ချင်လည်း ရပါတယ်။
(၆)နောက်ခံကိုပုံလေးနဲ့ လုပ်ချင်ရင် Background ဆိုတာလေးမှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
အနက်ရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှအမှတ်လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်Browse ကနေကလစ်ပြီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်ပါ။
နောက်ခံကိုပုံနဲ့မလုပ်ချင်လို့အရောင်နဲ့လုပ်ချင်ရင် အပေါ်ကနေရာလေးတွေမှာ အမှတ်ပေးပြီးလုပ်လိုက်ပါ။
(၇) အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင် save သိမ်းပါတော့မယ်။
ပြီးရင် save flash movie နေရာမှာ click ပေးပြီးရင် ok နှိပ်လိုက်ပါ။
Download: SWF Text v1-4 Portable
ဒီပို့စ်လေးက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ခေတ်သစ်မောင် တင်ပေးထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း ဆော့ဝဲလ်က Trial Version ပါ။ ကျွန်တော် Key ထည့်ပြီး Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ... စေတနာများစွာဖြင့်....... Thurainlin
Posted by Thurainlin at 07:56
Labels: Flash, Flash Song, Software, နည်းပညာ